Global Voices teny Malagasy » Isiraely: “Mahatsiaro Toy Ny Anaty Faritra An’ady i Ashdod ” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Novambra 2012 10:06 GMT 1	 · Mpanoratra Elizabeth Tsurkov Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Israely, Palestina, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Tamin'ny 10 Novambra, nitifitra balafomanga tsy midaroka fiara mifono vy (anti-tank) tamin'ireo miaramila Isiraeliana mpanao fisafoana i Gaza tao amin'ny faritra Isiraeliana, ao amin'ny sisintanin'i Gaza sy Isiraely, ka naharatràna olona efatra. Novalian'i Isiraely tamin'ny alalan'ny tifitra an'habakabaka izany tao Gaza; ary avy eo novalian'ireo antoko miaramila sy ny Hamas tamin'ny tifitra balafomanga ihany koa. Taorian'ny fifampiraharahana hanatsahatra ny ady, izay efa teo am-pijanonana ny tifitra balafomanga avy ao Gaza, novonoin'ny drones [voromby baikoan-davitra] an'ny tafika Isiraeliana ny lehiben'ny miaramila Hamas, Ahmad al-Jabari. Tifitra balafomanga variraraka kosa no namalian'ny miaramila tao Gaza izany. Nipoaka tamin'ny tranon'olona iray tao atsimo tanànan'i Kiryat Malachi ny iray tamin'ireo balafomanga, ka namoizan'aina olona telo tao amin'ilay fianakaviana. Farafahakeliny olona 13 no namoy ny ainy, olo-tsotra ny sasany tamin'izany, ary olona an-jatony no naratra vokatry ny fanafihana nataon'ny tafika Isiraeliana tao Gaza.
Nizara ny zava-niainany sy ny fihetseham-pony tao amin'ny aterineto ireo Isiraeliana niaina ny tifitra balafomanga tsy ankiato.
Hagit Eisha, mponina ao amin'ny atsimon'ny tanàna Beer Sheva nandefa ity manaraka ity tao amin'ny Facebook:
Teny an-dalana ho any amin'ny ray aman-dreniko handeha haka ny zanako vavy. Balafomanga efatra no teo amboniko sy teo anoloako, fahatairana, tara-pahazavana, setroka manerana ny lalana. Natahotra mafy aho. Niantso ny raiko tamin'ny finday aho ary nilaza azy hoe maty aho, toa mihevitra izy fa toy ny miresaka amin'ny ankizy 12 taona. Nampahery ahy izy ary nilaza tamiko fa miandry ahy ao ivelan'ny trano izy ary harovan'ny tafika Isiraeliana aho, nikikiaka kosa aho avy eo. Maro ireo fanairana nanomboka hatreo ary mbola mangovitra foana ny vatako hatramin'izao. Tiako raha mba hatsahatr'izy ireo izao [tifitra balafomanga] izao satria mampihorohoro tokoa ny ady.
Gal Zohar Za'arur izay monina ao atsimon'i Isiraely nandefa ity hafatra ity  tao amin'ny Facebook:
Tao amin'ny fianakaviako, izay efa samy lehibe avokoa, 15 taona ny zandriny indrindra. Tsy dia manelingelina anay intsony ny fanairana rehetra sy ny balafomanga. Midika ny fanairana fa mila manisa hatramin'ny 15 ianao dia manantena ny tsara indrindra. Tamin'ny Asabotsy alina, tany an-tranon'ny namako aho raha nanomboka naneno ny fanairana ‘Loko Mena ‘ [rafi-panairana (radara)]. Nandritra ny fanairana, nandeha tao amin'ny fialofana miaro amin'ny baomba izy ireo. Efa zatra tsy mitsofoka amin'izany intsony aho, kanefa mbola niaraka tamin'izy ireo ihany. Nahita ny rahalahiny mbola kely mifikitra amin-tahotra amin'ny reniny aho, ary nandritra ny fotoana fohy, nanontany aho hoe fa maninona izy no matahotra, ary maninona izy no mbola tsy zatra amin'izany foana hatramin'izao.
Fotoany fohy avy eo indray, tsapako fa adalana tanteraka ny mieritreritra hoe matahotra izy, fa izaho mihitsy no efa zatra amin'ilay zavatra.
MK Ilan Gil'on, mpikambana ao amin'ny antoko Meretz monina ao Ashdod, nandefa ity sary ity tao amin'ny Facebook, ahitana soratra hoe: “Mamonjy fialofana amin'ny baomba miaraka amin'ny zafikeliko Noya”.
Dana, monina ao Ashdod, nandefa ireto sioka  roa  ireto:
Farafahakeliny, feom-basy dimy mbola tsy nisy fanairana naneno, fipoahana hatraiza hatraiza, mahatsiaro ho toy ny faritra an'ady i Ashdod. Tahaka ny fitsangatsangana eny amin'ny zaridaina ny Hetsika Vitsìy nohamafisina (toy ny tamin'ny 2009) raha oharina amin'izany.
Zazavavy kely 3 taona, olioly volo, takolaka mavokely, dongadonga, nivoaka tao ambanin'ny tohatra niaraka tamin'ny elo mavokely mitsipitsipika. Nanontany azy ny reniko hoe fa ahoana. Nilaza izy fa hiaro antsika izany. Hatsoram-po miafina.
Mitantara ireo tifitra balafomanga marobe tao Beer Sheva ity lahatsary ity, izay navoaka tamin'ny 14 Novambra tao amin'ny Facebook, ary nisy nizara in-4.700
Maro tamin'ireo Isiraeliana, anisan'izany ireo izay misioka avy ao amin'ny toerana fialofana miaro amin'ny baomba no naneho ny fanohanany feno ny tafika Isiraeliana, ny hafa kosa nitsikera mafy ny governemanta.
Shirly Karavani, mponina ao atsimon'ny tanànan'i Ashqelon nanoratra ity vaovao farany tao amin'ny Facebook ity  izay niely tokoa:
Miarahaba, mponina aty atsimo aho, ary na dia eo aza ireo ambaran'ny sasany amin'ny fampahalalam-baovao,tsy nivonona tanteraka tamin'izany mihitsy aho! Ary toy izany ihany koa ireo mpiara-monina manodidina ahy, indrindra ireo monina amin'ny faritra taloha izay tsy mba voaaro mihitsy satria tsy manam-bola hanamboarana fialofana amin'ny baomba izy ireo izay mitentina 70.000 shekels. Koa azafady, ajanony ny mandray anay ho toy “herim-pirenenareo’. Ny zavatra hany mba faniriako dia ny miaina anaty filaminana sy mamelona ny zanako vavy. Mino aho fa an'arivony ireo renim-pianakaviana tahaka ahy ao amin'ireo sisintany roa [Gaza-Israel], an'hetsiny mihitsy aza. Araraotin'ny mpitondra izay tsy mba miezaka mitady vahaolana marina sy tsy mihevitra afa-tsy ny fijanonany eo amin'ny fahefany izahay.
Bar Heffetz , izay monina ao akaikin'ny sisitanin'i Gaza-Isiraely, nanoratra hoe:
Tsy mahita holazaina intsony aho. Raha mieritreritra aho hoe kilalaon'i” Bibi sy Barak [ny Praiminisitra sy ny Minisitry ny Fiarovana, tsirairay] ireo zanako . Ampy izay… 3 minitra avy eo Khan Younis
Ary hoy indray izy avy eo:
Tsy mba nahatsiaro maraina tahaky androany aho [fipoahana marobe]. Tifitra tafondro sy balafombanga (Kassam) tsy an-kiato, teo akaikin'ny toeram-pitsaboana no nianjera ny iray tamin'izany…
Iriako mba hianjera ao amin'ny “lalana Gaza” ny sasany amin'izany [fonenana ofisialy an'ny Praiminisitra ao Jerosalema] sy tranobe vaovao an'i Barak [nalaza ratsy i Barak tamin'ny fividianany trano lafo be tamin'ny tilikambo avo-be tao Tel Aviv, ary noho ny fahatezeram-bahoaka, namidiny indray izany ary nividy trano taminà trano avo-be moramora kokoa izy …
Hafatra avy amin'i Michal Vesser, mpampianatra sy mponina ao Kfar ‘Aza, akaikin'ny sisintany, nalefan'ny mpianany tao amin'ny Facebook:
Aza arovana aho!
Tena misaotra betsaka. Amina fiarovana tahaka izany, izay mbola mila miaro-tena… Nipetraka tao amin'ny trano fialofako amin'ny baomba aho tao amin'ny Kibbots Kfar ‘Aza ary nihaino ireo fipoahana nandritra ity ady miharo-hafetsena ity.
Raha te hiaro ahy ianao – aza mandefa tafika Isiraeliana mba “handresy”. Mba mieritreritra vinavina lavitra fa tsy hatramin'ny fifidianana izay hoavy ihany. Andramo ny mifampiraharaha, ampio i Mahmoud Abbas. Ajanony ny ‘famonoan'olona lasibatra’, jereo ireo olom-pirenena ao amin'ny faritra hafa. Fantatro fa maro amin'ireo olona no mety hanome tsiny ahy noho ny fahalemeko. Kanefa anisan'ireo mijanona eto aho amin'izao fotoana izao, ary milatsaka ao amin'ny tokontaniko avokoa ny balatafondro, tsy misy an'i Saar [Minisitry ny Fampianarana], tsy Bibi, na Shelly [Yechimovitch, lehiben'ny antokon'ny mpiasa izay naneho ny fanohanany ny hetsiky ny tafika Isiraeliana], tsy Yair [Lapid ihany koa, mpiasa tamin'ny fahitalavitra izay nivadika ho mpanao politika ka naneho ny fanohanany ny fitantanan'ny governemanta ny krizy ihany koa]. Izaho ny hany tokana nisafidy hamelona ireo zanany
Arak'izany, mba mangataka zavatra aminareo aho, aza vonoina ireo olom-pirenena ao amin'ny faritra hafa mba hiarovana ny aiko. Raha tianao ny hiafaran'ny fanafihana ao amin'ny faritra hafa, sokafy ny sofinao ary mba henoy aho.
Tsy voavahan'ny herisetra fanampiny ny ady feno herisetra.
Tsy ho tratra ny filaminana raha hampijaliana ny hafa. Marina ny mifanohitra aminy – torolalana amin'ny fanohizana ny tontolon'ny voninahitra.
Maro tamin'ireo Isiraeliana ankavia no nanamarika ny fifandraisana amin'ny fanamafisana ny herisetra sy ny fifidianana hoavy, izay atao amin'ny 22 Janoary 2013. Malaza  amin'ny fanaovana hetsika miaramila ny governemanta Isiraeliana rehefa akaiky toy izao ny fifidianana.
Nampiseho ny fitsapan-kevi-bahoaka (sondage) farany teo fa tsy hahatratra ny isa farany ambany (2%) takiana amin'ny fifidianana akory ny antokon'ny minisitry ny Fiarovana, Ehud Barak. Blue Collar, orinasam-pahalalam-baovao sosialy ankavia nandefa ity sary ity izay milaza ny tombotsoa azon'i Barak amin'ny fanamafisana ny herisetra amin'ny Palestiniana mialoha ny fifidianana.
“Inty i Ehud. Nanao fampielezan-kevitra amin'ny famotehana an'i Gaza”
Yoav Abramovich namazivazy hoe :
Raha nilaza ny minisitry ny Fiarovana fa “hihetsika ny Isiraely amin'ny fotoana mety sy amin'ny toerana safidiana” ny tiany ambara dia hoe afaka roa volana mialoha ny fifidianana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/11/18/40904/
 nandefa ity manaraka ity : https://www.facebook.com/hagit.eisha/posts/10151244266479483
 ity hafatra ity: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151352558597176&set=a.10150231898867176.371151.260689792175&type=1
 Loko Mena: http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Color
 ity sary ity : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=466207320088773&set=a.304694509573389.68848.302282753147898&type=1
 lahatsary ity, : https://www.facebook.com/photo.php?v=10151145480557832
 vaovao farany tao amin'ny Facebook ity: https://www.facebook.com/shirly.karavani/posts/10151273210612958
 Hafatra : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151262791743257&set=a.225297583256.132129.530473256&type=1&theater
 ity sary : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=522092331137009&set=a.482471288432447.116022.415315815147995&type=1&theater
 namazivazy hoe: https://www.facebook.com/yoav.abramovich/posts/10151506762881959